Spiro: Proactive Kutengesa Engagement Uchishandisa AI | Martech Zone
Spire inoshandisa huchenjeri hwekugadzira kupa vatungamiriri vako vekutengesa zviito zvinonzwisisika uye vamiririri vako vekutengesa vanokurudzira mazano anotevera akanakisa matanho kubatsira kudzivirira mikana yakarasika uye kuwedzera kutengesa kwekutengesa.
Spiro vatengi vanotaura zvimwe zvinoshamisa mhedzisiro, inosanganisira:
Iko kugona kuunganidza Ka16 mamwe data
Iko kugona kwako kana rako rekutengesa timu ku kusvika kune makumi matatu muzana tarisiro munguva imwe cheteyo.
Iko kugona kwe vhara 20% zvimwe zvekutengesa zveefa
Zvakanakira Spiro Sanganisira
Spiro iri kuunza nzira nyowani yekutengesa otomatiki: proactive hukama manejimendi.
Tarisa zviitiko zveboka - Iyo Spiro Mubatsiri inopa vashandisi neinotungamira yezuva nezuva yeku-ita runyorwa rweAI uye mushandisi-inogadzirwa mabasa anowedzera kuburitsa.
Wedzera kugadzirwa kwechikwata - Yakavakirwa-muVoIP yekufona uye AI-inogadzirwa mafoni mazita anotendera zvikwata kuti zviwane zvakawanda tarisiro, uye otomatiki kufona matanda kunowedzera kugona kweboka.
Iva nechokwadi chekuita basa - Spiro inopa zviyeuchidzo zvekuteedzera zvinoteedzana zvinoenderana nehurukuro kuona kuti hapana dhiri rinotenderera kuburikidza nekutsemuka.
Kurumidza dhizaini kufambira mberi - Spiro anoongorora zvibatanidzwa zvibodzwa uye anotarisa reps pamikana ingangodaro yekuvhara.
Wedzera ma win-rates - Spiro inopa yakazara pombi kuoneka uye inoitisa njere kubatsira kudzivirira akarasika madhiri.
Kutengesa Kufanotaura - Spiro inopa kuoneka kuzere mupombi yako uye inopa zvibodzwa zvekuita kuti uvandudze kurongeka.
Spiro haina kutsiva yekushambadzira otomatiki chishandiso (pachinzvimbo, ivo vanobatana pamwe neaya maturusi), asi iwe unogona kutumira zvakafanirwa maemail kune zvakanangwa zvinyorwa zvevane 500 vanobatika, nekwanisi yekuzvironga zvenguva yemberi uye zuva.
Ronga Spiro Demo
Kutenda kwakakosha kuna Sheryl pa Dare reMakurukotaM yeiyo tsvaga!
Tags: aicabinetmwedzera madhirikuwedzera kutengesa kunovharakutengesa kwakabudakufungidzira kutengesa kubatanidzwaKugonesa Kugonesakutengesa kubatanidzwayekutengesa timu chiitikokutengesa timu kuberekaspirovoip
Matipi mashanu Ekubata NeveMedia Seye Nyanzvi Source
Sunga Zvisingaenzaniswi Nguva Kuti Ugadzirise Maitiro Atinoshanda